Portable Juicer Cup forcategory_name
စုစုပေါင်းသယ်ယူပိုဆောင်ခြင်း (tax excl.)	စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားနိုင်ရန်
ပင်ရင်းဆိုင် > Wailinn Soe
အခုလိုအရမ်းပူတဲ့နွေရာသီမှာ ကျန်းမာရေအတွက် လတ်ဆတ်တဲ့သီးနှံများကို အလွယ်တကူးJuice လုပ်၍သောက်သုံးနိုင်သော portable battery juicerလေး ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
30 Item Itemများ
သတိပေးချက် − နောက်ဆုံး items တစ်ခုဘဲကျန်ပါတော့တယ်။
-- select -- $ Dollar K Myanmar Kyats
အလွယ်တကူးသွားလေရာရုံး၊အိမ်၊ခရီးသွားရင်သယ်ယူသွားနိုင်ပြီးရောက်လေရာနေရာတွင်မိမိကြိုက်သည့်အသီနှံများကိုဝယ်ယူပြီးJuice လုပ်ကားအရည်သက်သက် အဖတ်ဖတ်စစ်ထုတ်၍သောက်သုံးနိုင်သောjuicer လေးဘဲဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဖုန်းbattery အားကုန်ရင်လည်းpower bank အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သောအလွန်အသုံးဝင်သော Juicer လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်
No.502 South Ookalapa
Nicer Dicer 13 in 1
အိမ်ရှင်မတို့အတွက် အချိန်မကုန်ဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ လှီးနိုင်စိတ်နိုင်တဲ့ ပုံစံ ၁၃မျိုးနဲ့ လှီးလို့ရတဲ့ ဓါး ပါ ။
MiraScreen Wifi Stick
Wi-fi stick လေးဟာ HDMI ပါဝင် တယ့် TV, Monitor Display မှာတပ်ဆင်အသုံးပြုရမှာပါ ။
Solar Power bank with LED Lamp
နေရောင်ခြည် & လျှပ်စစ်၂ခုလုံးနှင့်အတူကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ပြီးတော့ အားကို 4/5 ကြိမ်အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Hello kitty selfi stick
 မိမိတို့ photo တွေကို ရိုက်ရာ တွင် လွန်စွာမှ အသုံး ၀င်လှ တဲ့ self stick ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်
Beats Stereo Bluetooth Head phone
 မည့်သည်ဖုန်းနှင့်မဆို တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Beats နားကြပ်ဆိုကတည်းက အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးကောင်းမွန်သလို ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းယခုခေတ်လူငယ်တွေ အကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Lather ကြိုးGSM စမတ်နာရီ
 အသစ်ရာက်ရှိလာတဲ့ ဒိုင်ခွက် အ၀ိုင်၊ Lather လတ်ပတ်ကြိုး နှင့်မြန်မာစာပါ...smart နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်း ကို ကပ်ထားပြီး အသုံးပြု ရတဲ့ Handset ring လေးဖြစ်ပါတယ် ။
Fashion Mobile Mini Mic
Phone , Computer, Laptop တွေရဲ့ Earphone အပေါက်မှာ Join ပြီးသုံးရမှာပါ.....  OTG ကြိုးတခုနဲ့တွဲပြီးသုံးရမှာပါ။
မည်သည်ဖုန်းအမျိုးစားမဆိုအသုံး ပြုလို့ရပါသည်။  ပစ္စည်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ကောင်းကောင်း ကြိုက်သူများအတွက် Speaker အသေးဆုံးလေးလာပါပြီး။
Ice drop touch blue tooth speaker
$18.80	$20.00 -6%
 Function , menu , volume + / - , next , play , pause button အားလုံး တိုးထိရုံဖြင့်အသုံးပြု နိူင်သေား touch button များပဲဖြစ်ပါတယ်။  Computer ; Laptop ; mobile phone ,tablet တို့နှင့်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
 အရေးကြီးစကားပြေားခြင်းများအတွက် သက်သေ video record လေးရယူလိုပါသလား?
ရေစိုခံ korea LED နာရီ
 korea LED နာရီ လေးဖြစ်ပါတယ်  ရေစိုခံသောနာရီ ဖြစ် ပါတယ် ။
Korea Cosmetic .ဘီဒို
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ကိုတစ်စု တစ်စည်းထဲ ထားခြင်တဲ့သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိတ်ဆောင် Smart Car ဓါး
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်ထည့် ဆောင်ထားနိုင်သော အိတ်ဆောင် Card ဓါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်ထားချိန်တွင် ATM card size သာရှိပြီး ဖြန့်ကိုင်လိုက်ချိန်တွင် ဓါတစ်ချောင်းကဲသို့ဖြစ်သွားပါတယ်။
USB mini rechargable Fan power bank
နွေရာသီရောက်၌ အိုက် ပြီ ချွေးပြန်နေသေားအခါ ယပ်တောင် ဖြင့် ယပ်ခပ်ရန် မလိုပဲ smart ကျကျ လက်တွင်ကိုင်ရင်း မိမိ မျက်နှာနှင့် တကိုလုံး အား အေးမြနေစေရန် အအေး ပေးနိုင်သေား Mini USB rechargable Fan လေးပဲဖြစ် ပါ တယ်
E- စီကရက် (VAPE)
E- စီကရက် (VAPE) ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများအတွက် ဆေးလိပ်အစား ထိုးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ချစ်ခင်သူများကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြည်နိုင်ရန် လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
KARAOKE MICROPHONE WIRELESS SPEAKER
Mic ပါဝင်တယ့် Bluetooth သုံး K1speaker လေးကတောKaraoke သီချင်းသီဆိုမူအတွက်အကောင်းဆုံးသောရွှေးချယ်မူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Mini Helicoptor ( Remote )
ကမ္ဘာအသေးဆုံး Remote ဖြင့် ထိမ်ချူပ်၍ အပြင်းပြေပျံသန်မောင်နှင်နိုင်သေားအိတ်ဆောင် mini ရဟတ်ယည်လေးပဲဖြစ်ပြီသွားလေရာအိတ်ထဲထည့်သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်....
 Mini Projector အသုံးပြု သူများအတွက်တော့.၅၈ လက်မ ပတ်လည် ( ၅.၆ ပေ )  size က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးprojector screen လေးခံသုံးမှ ရုပ်ထွက် ပိုကောင်းပြီး အလင်းပိုတောက်ပပါတယ်
Wifi spy camera P2P (Night vision )
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ wifi spy camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းတနေရာမှာ ကပ်ထားရင်း မြှုတ်ထားရင်းဖြင့် လက်မ လောက်ရှိတဲ့ camera လေးမှ video အရုပ် အသံကို အားကောင်းကောင်းဖြင့်ဖမ်းယူပြီး wifi signal SSID ပြန်လွင့်ပေးပါတယ်။
DOOR WINDOW ENTRY ALARM Model RL-9805
မိမိတို့အိမ်..ခြံ သူခိုးကပ်မှာ..၀င်မှာစိတ်ပူနေပါသလား? အိမ်ထောင်ဦးစီး ယောကျာ်းများ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရလို့ မိန်းမနဲ့ ကလေးကို အိမ်မှာထားခဲ့ ရမှာစိတ်မချဖြစ်နေလား? ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ၀ါယာကြိုးမလိုဘဲ မည်သည့် တံခါး..ပြတင်းပေါက်မှာမဆိုအလွယ်တကူ တပ်ဆင်လို့ရပါတယ်။
*Andriod, IOS, Phone, Computer အားလုံးနဲ့တွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Wireless Keyboard လေးလာပါပြီ။
*ကက်ဆက်မပါတဲ့ ကားတွေအတွက် .. ကားမောင်းရင်းနဲ့ ပျင်းလာပြီး အိပ်မငိုက် စေရအောင် Bluetooth Car Charger လေးကို အသုံးပြုကြရအောင်။ *မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းများကို ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး နားထောင်နိုင်သလို.. USB Stick နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
Buttom Spy Camera (ကြယ်သီးပုံ spy camcorder)
$10.79	$13.00 -17%
Bluetooth Ear Phone လေးကို တစ်ယောက် တစ်ဖက်စီသာ တပ်ထားလိုက်ပါ။ ကောင်လေးရဲ့နောက် ကို spy လိုက်စရာမလိုဘဲ သိနိုင်တယ်နော်..တစ်ယောက်နားထောင်နေတာကို နောက်တစ်ဖက်က လုပြီး နားထောင် လို့လည
LUQING E-liquid for Electronic Cigarettes...
LUQING E-liquid for Electronic Cigarettes (10ml) လေးကတော့ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ လူငယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများ အတွက် အထူးသင့်လျှော်တဲ့ ဆေးလိပ်အစားထိုး (E- Cigarettes) လေးဖြစ်ပါတယ်။ E- Cigarettes လေးကို ပုံတွင်ပါသော (Liquid) ဆေးရည်ဖြင့် တွဲဖက်သောက်သုံးကြည့်ပါကဆေးလိပ်ကဲ့ သို့ အရသာမျိုးကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Waterproof Heavy Duty Hybrid Swimming Dive...
Andriod/IOS ဖုန်းများအတွက် ရေစိုခံ Waterproof Cover လေးပါ။ သင်္ကြန်လည်မယ့် ကိုကို၊ မမ များအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ Cover လေးပါ။
About problemclean Group
Buy on problemclean.com
Sell on problemclean.com
© 2016 ProblemClean.com. All rights reserved.